The Kobo Aura One, nnukwu ihuenyo eReader, pụtara na ndudue | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụ eziokwu na anyị tụrụ anya na na njedebe nke ọnwa a Kobo ga-eweta eReader ọhụrụ ya, nke bụ eziokwu bụ na site na ndudue, anyị amatala ngwaọrụ ọhụụ tupu oge eruo. A Dutch ahịa site njehie agbapụtawo nkọwa na ihe oyiyi nke Kobo Aura One ọhụrụ, eReader nke Kobo na Rakuten ga-eweta n'oge na-adịghị anya.
Ngwaọrụ a agaghị abụ eReader dị ka ụdị ndị dị ugbu a mana ọ ga-enwe nnukwu ihuenyo, nnukwu ihuenyo 8-anụ ọhịa nwere teknụzụ Carta na nnukwu mkpebi, ịbụ ihe pụrụ iche n'ahịa.
Otu Kobo Aura Otu ga adi onu ala karịa Kindle Oasis
Ndi Kobo Aura One ga-enwe ihe ngosi 8 nke anụ ọhịa kamakwa akwụkwọ IP68, akwụkwọ a ma ama ka ọ na-egosi na eReader ga-eguzogide mmiri, ájá na ụfọdụ ụjọ. Yabụ Kobo Aura One ga-abụ nnọchi maka Kobo Aura H2O, Rakuten mbụ eReader nke na-enweghị mmiri. Kobo Aura Otu ihuenyo nwere nha nke 7,8 sentimita asatọ mkpebi nke 1872 x 1404 pikselụ, omimi nke 300 ppi na ìhè. Na mgbakwunye ịnwe teknụzụ Carta.
Banyere ngwaike dị n’ime, eReader nwere 512 Mb nke ebule na 8 Gb nke nchekwa dị n’ime ya nke na - agaghị agbasawanye ebe ọ bụ na eReader enweghị oghere maka kaadị microsd. Na ngwaọrụ ngwaọrụ bụ 252 gr ma nwee nha nke 195 x 138.5 x 6.9 mm. Ihe na-akpali mmasị n'ihi na n'agbanyeghị ịnwe nnukwu ihuenyo, akụkụ ya adịchaghị oke.
The eReader ga-edebe Kobo software nke ga - eme ka ọ dakọtara na ọtụtụ usoro ebook yana ịnwe oke nke ga - ewe otu ọnwa ọ bụ ezie na anyị amaghị amperage nke batrị dị otu a. Ndi Kobo Aura One ga-aputa n'ahịa na-efu euro 229. Ọnụahịa dị oke ọnụ maka eReader, mana ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere amazon Amazon Kindle Oasis, Kobo Aura One dị ọnụ ala ma nwee akụkọ karịa. Yabụ na ọ dị ka ahịa eReader ka nwere ọtụtụ ihe ị ga-ekwu nakwa na ọchịchị Amazon na Kindu ya na-agagharị. ma ọ bụ ma eleghị anya ọ bụghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » ndị na-agụ akwụkwọ » Kobo Aura One, nnukwu ihuenyo eReader, na-egosi site na ndudue